Soo dejisan Skype 6.2.0.17000 – Android – Vessoft
Soo dejisan Skype
Skype – software caan ah si ay isgaadhsiin u dhexeeya dadka isticmaala internet-ka ee. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad u sameyso wicitaano cod iyo video, fariimaha qoraalka ah sarrifka iyo diri video ama sawir fariimaha. Skype awood u ah in la abuuro in shir la yeeshaan tiro badan oo ah dadka isticmaala, ula macaamilaan kuwa kale oo ay wadaagaan faylasha. Software ayaa sidoo kale awood u siineysaa inay u sameyso wicitaano in telefoonnada gacanta iyo kan guriga telefoonada oo dunida dacaladeeda ah ee heerka u hooseeya. Skype ka kooban tahay qalabka siinaya awood u leeyahay inuu u astaysto software in ay baahida user ka.
Voice iyo isgaarsiinta video
Awoodda loo leeyahay in la abuuro shir
Skype Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... Total Commander 2.62